सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको ओपनिङ रेञ्ज कति होला त ? यस्तो छ अनुमान ! बिस्तृत जानकारीसहित | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
बैशाख १२, काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि न्युनतम प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ र अधिकतम ३०० रुपैयाँ सम्म रेञ्ज पाउने सम्भावना छ । सिंगटी हाइड्रोले गत चैत ६ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म आईपीओ बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल २९ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
जसमा २ प्रतिशत अर्थात ५८ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख ४५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँड गरिएको छ । बाँकी २६ लाख ९७ हजार कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिएका छन् ।